रेस्टुरेन्टमा कुटपिट काण्ड : विराजले मागे माफी access_timeबैशाख १०, २०७६
निमार्ण नियन्त्रक शंकर पाण्डेमाथि हातपात गरेका अभिनेता विराज भट्टले माफी मागेका छन् । भट्टले प्राविधिक संघले बोलाएको मंगलबारको बैठकमा आफूले हात हाल्नु गल्ती भएको भन्दै माफी मागेका हुन् । अभिनेता र प्राविधिकबीच भएको विवाद मिलाउन प्राविधिकहरुबाटै चर्को दवाब आएपछि सं...
अभिनेता विराज र निर्माण नियन्त्रक शंकरबीच रेस्टुरेन्टमै कुटाकुट access_timeबैशाख १०, २०७६
अभिनेता विराज भट्ट र फिल्मका निर्माण नियन्त्रक शंकर पाण्डेबीच कुटाकुट भएको छ । सोमबार साँझ नयाँ बानेश्वरमा स्थित एक क्याफेमा दुवैबीच कुटाकुट भएको हो । फिल्म ‘साङ्लो’ निर्माणको बिषयलाई लिएर भएको बिवाद पछि उनीहरुले कुटाकुट गरेका हुन् । ‘साङ्लो&...
सोनाक्षीले बबी देओललाई जुरुक्कै उठाएपछि... access_timeफागुन २६, २०७५
बलिउडका अभिनेत्रीहरुमध्ये शत्रुघन सिन्हा पुत्री सोनाक्षी आफ्ना फरक अभिनय शैलीको कारण चर्चित छिन् । खासगरी, परम्परागत अभिनेत्रीहरुले जस्तो विशुद्ध महिलाले मात्रै गर्ने खालको अभिनयभन्दा पनि ‘मर्दानी’ अर्थात् अभिनेताहरुले गर्ने खालका दृश्यहरुमा उनी बढी जम्ने गर्छिन् ...
रबिनादेखि अभिषेकसम्मः आखिर किन अन्तिम अवस्थामा टुट्यो यी सेलिब्रिटीको विवाह access_timeसाउन २५, २०७४
बलिउडमा यस्ता थुप्रै स्टार्स छन् जो प्रेम सम्बन्धमा रहे र विवाह पूर्व एकअर्कालाई डेट पनि गरे । यद्यपी, यीमध्ये कतिको सम्बन्ध इन्गेजमेन्टसम्म पुग्यो तरपनि अन्तिम अवस्थामा विवाह टुट्यो । यसमा रबिना टन्डनदेखि सलमान खानसम्मको नाम समावेश छ । आज हामी तपाईंलाई यस्तै सेलिब्रिटीबारे जा...
कसैले टपलेस फोटो पठाएपछि मोडलबाट खोसियो ‘ब्यूटी क्विन’ को ताज access_timeमंसिर १२, २०७५
स्कटल्याण्डकी एक मोडलको ब्यूटी क्विनको उपाधि खोसिएको छ । त्यो पनि टपलेस मोडलको रुपमा विगतमा काम गरेको भन्ने जानकारी लुकाएका कारण । ३५ वर्षे नतालिया पावेलेकले सेप्टेम्बरमा मिसेस स्कटल्याण्ड २०१८ को उपाधि जितेकी थिइन् । तर त्यसको केही घण्टाभित्रै नतालियाले पुरुष म्यागज...
१८ वर्ष कान्छीसँग राहुलको तेस्रो विवाहबारे पूर्वपत्नी डिम्पीको यस्तो बयान access_timeमंसिर १०, २०७५
४३ वर्षका राहुल महाजनले आफूभन्दा १८ वर्ष कान्छी मोडल नाताल्या लिनासँग तेस्रो विवाह गरेका छन् । कजाकिस्तानमा बस्ने नताल्या २५ वर्षकी हुन् । उनको तेस्रो विवाहमा उनकी दोस्री पूर्वपत्नी डिम्पी गांगुलीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा जब डिम्पीलाई राहुलल...
के अनमोलको प्रेममा छिन् सारा ? access_timeमंसिर ९, २०७५
काठमाडौंं – अभिनेत्री सारा सिर्पाली अहिले तेस्रो प्रोजेट ‘सुश्री सम्पत्ति’को प्रचार प्रचारमा छिन् । निखिल उप्रेती अभिनित ‘रुद्र’ बाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी उनले दोस्रो चलचित्र ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ पनि निखिलसँग नै अभिनय गरिन् ।&nbs...
शाहरुखले ऐश्वर्यालाई सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ‘भुतिनी’ भनेपछि... access_timeमंसिर ५, २०७५
एजेन्सी । बलिउडका ‘रोमान्स किङ्ग’ शाहरुख खान फिल्ममा जति ‘रोमान्टिक’ देखिन्छन् सार्वजनिक कार्यक्रमको माहोल पनि उत्तिकै रमाइलो बनाउँछन् । आइतबार राति गोरेगाउँस्थित नेशनल स्पोट्स अफ इण्डियामा ‘लक्स गोल्डेन रोज अवाड २०१८’ को आयो...
प्रबल गुरुङले पाटन दरबार स्क्वायरमा भने, ‘म एक समलिङ्गी हुँ र यसमा मलाई गर्व छ’ access_timeकात्तिक २०, २०७५
विश्वचर्चित अमेरिकी नेपाली फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङले आफ्नो लैंगिक अभिविन्यासबारे घोषणा गरेका छन् । पाटन दरबार स्क्वायरमा फोटो काठमाडौंले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रबलले आफू समलिङ्गी भएको घोषणा गरेका हुन् । उनले यस्तो घोषणा गर्नेबित्तिकै त्यहाँ उपस्थित दर्शकले ...
सुनिल ग्रोवर कमेडी शोमार्फत् फिर्ता हुँदै, शाहरुख खान र रणबीर हुनेछन् पाहुना ? access_timeकात्तिक १८, २०७५
भारतीय हास्यकलाकार सुनिल ग्रोवर मिनी कमेडी सिरिजसहित टेलिभिजनमा फिर्ता हुने तयारीमा भएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार उक्त सिरिज १२–१५ एपिसोडको हुनेछ । यसमा बलिउड अभिनेताको पनि सहभागिता हुने बताइएको छ । सुनिलको नयाँ कार्यक्रम कपि...
२१ वर्षपछि आखिर किन बन्द भयो सिआइडी ? access_timeकात्तिक १४, २०७५
बीबीसी /सूर्यांशी पाण्डेय अब एसिपी प्रद्युम्नले हरेक अनुसन्धान अघि ‘केही त गडबड छ दया’ भन्ने छैनन्, अब दयालाई ढोका तोडिरहेको देख्न पाइँदैन किनभने सोनी च्यानलको कार्यक्रम ‘सिआइडी’ २१ वर्षपछि अफएयर भएको छ । सन् १९९७ मा पहिलो पटक सोनी च्यान...
बिगबसः २८ वर्षे जसलिनसँगको सम्बन्धबारे ६५ वर्षे भजन सम्राटकी पूर्व श्रीमतीको यस्तो प्रतिक्रिया access_timeअसोज ७, २०७५
बिग बस १२ मा सबैभन्दा धेरै चर्चा जुन प्रतिस्पर्धीको छ, त्यो जोडी हो ६५ वर्षे भजन सम्राट अनुप जलोटा र उनकी २८ वर्षे प्रेमिका जसलिन मथारुको । जलोटा क्रमशः बिग कसको खेल बुझिरहेका छन् र अन्य प्रतिस्पर्धीसँग खेल खेल्नका लागि रणनीति बनाइरहेका छन् । उनकी प्रेमिका जसलिन पनि निकै...
साम्राज्ञीले धोका दिँदा हिरोको अङ्गालोमा निर्देशक access_timeअसोज २, २०७५
काठमाडौं – अवार्डको लोभ कुन कलाकारलाई हुँदैन र ? नेपालको हकमा त कलाकार अवार्डका लागि लगानी गर्न समेत तम्सिने गर्दछन् । कलाकारले कहिलेकाँही अवार्डको लोभ गर्दा उसले अभिनय गरेको चलचित्र युनिट निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । यस्तै अवस्थाको सामना...
दीपकले भन्न सकेनन् आफ्नै चलचित्रको रिलिज डेट access_timeभदौ १९, २०७५
काठमाडौं – तपाईँको चलचित्रको रिलिज डेट कहिले ? प्रायः निर्मातालाई यो प्रश्न राख्ने हो भने तुरुन्तै जवाफ पाउन सकिन्छ । फलानो दिन । तर अभिनेता दिपकराज गिरीले भने आफ्नो चलचित्रको रिलिज दिन तोक्न सकेका छैनन् । प्रसंग हो –केही दिन पहिले रिपोटर्स क्लब ...
केमा होला साम्राज्ञीको ह्याट्रिक ? access_timeसाउन ३१, २०७५
काठमाडौं – अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई हिरोइन अनुबन्द गरिए चलचित्र चल्छ भन्ने मानसिकता केही निर्माता निर्देशकमा गढेको छ । उनी अभिनित ‘ड्रिम्स’ र ‘ए मेरो हजुर २’को सफलताले निर्माता निर्देशकमा यो छाप परेको हो । यो छापका कारण अ...
‘यो पागल मन’ले फर्काउँला ऋचाको क्रेज ? access_timeअसार २९, २०७५
काठमाडौं – अभिनेत्री ऋचा सिंह ठकुरी अहिले चर्चामा छिन् । उनी अभिनित चलचित्र ‘यो पागल मन’ भोली शुक्रबारबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । यही चलचित्रको प्रचार प्रसारको कारणले पनि उनको चर्चा बढेको हो । ‘यो पागल मन’बाट उनले लामो समय...
विवादका कारण ‘रोजी’को छायाँकन अनिश्चित access_timeअसार ७, २०७५
काठमाडौँ । विवादका कारण छायाँकन रोकिएको चलचित्र ‘रोजी’को छायाँकन दिन प्रतिदिन अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ । रोजी महर्जन हत्याकाण्डमा आधारित रहेर निर्माण थालिएको चलचित्रको छायाँकन निर्माण संस्था र रोजी परिवारबीच भएको विवादका कारण केही दिन पहिले रोकि...
फिल्मको संख्या घटाउँदै दयाहाङ : भन्छन्, 'पैसामुखी बनेको आरोप लाग्न थाल्यो' access_timeअसार ६, २०७५
काठमाडौं । पछिल्लो समय नियाल्ने हो भने अभिनेता दयाहाङ राईका चलचित्रले हल टुटाएका छैनन् । उनी स्वयम्लाई पनि थाहा हँुदैन । आफ्नो कुन चलचित्र प्रदर्शनमा आयो र कुन आउँदैछ भनेर । कारण, उनले धेरै चलचित्र अभिनय गर्नु नै हो । सायद, त्यसैले पनि होला अभिनेता दयाहाङले अब भ...
कुटाकुटपछि प्रहरी चौकीमा मिल्यो ‘लालपुर्जा’ र ‘हाइलाइट’को विवाद access_timeजेठ ८, २०७५
काठमाडौं – चलचित्र ‘लालपुर्जा’को निर्माण युनिट र डिजिटल अधिकार खरिद कम्पनी हाइलाइट नेपालबीचको विवाद प्रहरीमा पुगेर मिलेको छ । मंगलबार पुलचोक स्थित प्रहरी वृतमा मिलापत्र गर्दै दुबै पक्षबीचको विवाद टुङ्ग्याइएको हो । सोमबार चलचित्रका निर्देशक...
‘दि कर्मा’मा नीताको सरप्राइज इन्ट्री ! access_timeजेठ ४, २०७५
काठमाडौं – अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना ‘दि कर्मा’ चलचित्रमा भित्रिएकी छन् । उनीसँगै चलचित्रमा परमिता राज्यलक्ष्मी राणा तथा बुद्दी तामाङ समेत भित्रिएको निर्माण युनिटले जनाएको छ । पुरै छायाँकन सकेर पोष्ट प्रोडक्सनमा रहेको यो चलचित्रमा नयाँ कलाकार भ...
करिश्मा स्कूलमा, छोरी कविता चलचित्रमा access_timeबैशाख ३१, २०७५
काठमाडौँ । चलचित्र अभिनयमा कलाकारको सन्तान प्रवेशको क्रम बढ्दो छ । यस्तैमा सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरकी छोरी कविता मानन्धर पनि अभिनयमा देखिने भएकी छन् । कविता पुराना अभिनेता शिव श्रेष्ठले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ बाट डेब्...
सोफिया हयातले विवाहको एक वर्षपछि नै श्रीमानलाई घरबाट निकालिन् access_timeबैशाख १८, २०७५
नन बनिसकेपछि विवाह गरेकी बोल्ड नायिका सोफिया हयातले एक वर्षपछि श्रीमानलाई घरबाट निकालेकी छिन् । श्रीमानसँग पवित्र सेक्स सिकाउँछु भन्ने यी नायिकाले श्रीमान् भ्लाद स्ट्यान्स्यूसँगको सम्बन्ध समाप्त गरेको जानकारी इन्टाग्रामार्फत दिएकी हुन् । आजकाल न्यूयोर्कमा बसिरहेकी सोफिय...
प्रियंकाले संख्याभन्दा गुणस्तरतिर ध्यान दिने कि ? access_timeबैशाख १२, २०७५
काठमाडौं – ‘अफर आएका जति फिल्म खेल्नुपर्छ । अफर आएको बेला फिल्म नखेले पछि के हो के हो’ । अहिले चलचित्र क्षेत्रमा केही कलाकारले भन्ने शब्द हुन् यी । ती केही मध्यमा अभिनेत्री प्रियंका पनि पर्छिन् । प्रियंका अहिले धेरै भन्दा धेरै चलचित्र अभिनय गरिरहेकी छ...
कपिलले पुलिसमा दर्ता गरेको आरोपपत्र लिक, पूर्व प्रेमिकामाथि लगाए यस्तो आरोप access_timeबैशाख ७, २०७५
भारतीय हास्यकलाकार कपिल शर्माबारे लगभग हरेक दिन केही न केही खबर आइरहेका हुन्छन् । कपिलले प्रीतिविरुद्ध भारतको ओशिवारा पुलिस थानामा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । कपिलले आरोप मराठी भाषामा दर्ता गराएको भएपनि एक समाचार च्यानलले यसलाई हिन्दीमा प्रकाशित गरेको छ । कपिलले आ...
आँचलजी, के हावा नचली पात हल्लिन्छ र ? access_timeचैत २३, २०७४
काठमाडौं – अचेल ‘शत्रु गते’ चलचित्रको चर्चा चुलिदो छ । तीन साता अगाडी प्रदर्शनमा आएको ‘शत्रु गते’ले यो शुक्रबार पनि धेरै चलचित्र भवनमा निरन्तरता पाएको छ । चलचित्रको ब्यवसाय पनि राम्रो भइरहेको निर्माण युनिटको दाबी छ । तर, चलचित्रले जति ...